जिन्स पाइन्टमा किन हुन्छ ठूलोसँगै सानो गोजी ? यस्तो छ रोचक तथ्य एवम् वास्तविकता « गोर्खाली खबर डटकम
एजेन्सी । हाम्रो जिवनमा केही यस्ता कुराहरु हुन्छन् जसलाई हामी हरेक दिन देखे भोगको हुन्छौँ तर त्यस्तो कुरा तथा घटना हुनु पछाडिको कारण कहिल्यै पनि जानेका हुँदैनौँ र जान्ने कोसिस पनि गर्दैनौँ । हाम्रो दैनिक जिवन सँग सम्बन्धित केही रहस्य तथा तथ्य र त्यसमा लुकेको गुह्य वास्तविकता यस्ता छन्ः
जिन्स पाइटको अगाडि पटि्टको गोजी माथि एउटा सानो गोजी हुन्छ र उक्त गोजीको दुबैपटि्ट बटन पनि हुन्छन् । यस्ता साना पकेट सिक्का राख्नका लागि होला भन्ने ठान्छौँ हामी । तर होइन । वास्तवमा १९ औँ सताब्दीमा गाइ गोठाला अर्थात् काउब्वाइज र सुनखानीमा काम गर्ने कामदारको घडी पकेट वाच राख्नका लागि यस्तो सानो गोजीको डिजाइन गरिएको हो ।
कपडाको जुत्तामा किन राखिन्छ अतिरिक्त प्वाल ?
कहिलेकाहीँ तपाइँलाई पनि अचम्म लाग्दो हो आखिर किन कुनै जुत्तामा साइडमा अतिरिक्त प्वाल राखिएको हुन्छ ? ती प्वाल कुनै तुना छिराउनका लागि बनाइएको होइन । जुत्तामा हावाको भेन्टिलेसनका लागि अतिरिक्त प्वाल बनाइएको हो । जसका कारण जुत्ताभित्रको खुट्टासम्मै हावा छिर्दछ ।
ताप्केको बिँडमा किन प्वाल हुन्छ ?
ताप्केको बिँडमा टुप्पोमा प्वाल हुन्छ । यसरी बिँडको प्वालको काम केवल ताप्के झुण्डाउनका लागि मात्र होइन । पकाउने बेला डाडु पन्यू घुसारेर राख्नका लागि पनि यसको प्रयोग हुन्छ ।
कि बोर्डमा एफ र जे अक्षरको की मा किन सानो लाइन हुन्छ ?
टाइप गर्ने बेला दुबै हातका गरी १० वटा औँला राखिने की हरु मध्ये एफ र जे अक्षरको की मा चोर औँला पर्दछन् । त्यसैले कि बोर्ड नहेरीकन टाइप गर्दा समेत औँलाहरु सही की मा परुन् भन्नका लागि एफ र जे की मा केही उठेको सानो लाइन राखिएको हुन्छ ।
बुढो विदेशमा, बुढी जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटिइन्, यसरी चल्दो रहेछ परिवार (भिडियोसहित)